Video 2 - Mmekọahụ nke Mmekọahụ (Nkebi nke 2) | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
2 vidiyo - Mgbagha Mmekọahụ (Akụkụ 2).
Dysphoria okike, Mmekọahụ nke Mmekọahụ / Site mere
Vidio 2 - Dysphoria nke Childhoodmụaka
Nkowa nke nmekorita nwoke na nwanyi. (Akụkụ 2)
Ugbu a, ole ka odi? Ka a na-akpọga ọtụtụ puku n'ụlọọgwụ ndị nwoke na nwanyị. Olee otu o si di? Ekwuru m site na DSM ahụ, akwụkwọ nyocha na sayensị tupu mgbe ahụ, maka nkọwa ahụ. Nke a bụ echiche ha. Nke a bụ nkwubi okwu sayensị ha banyere ihe mere nke ndị okenye. Ha na-ekwu na nnọchi nke ndị okenye na ụlọọgwụ nwoke na nwanyị sitere na 0.005 ruo 0.014 pasent nke ụmụ nwoke toro eto na-ewere onwe ha ụmụ nwanyị na 0.002 ruo pasent 0.003 nke ụmụ nwanyị na-achọpụta dị ka ụmụ nwoke.
Yabụ, nke a bụ nkwupụta nke DSM, na-eme ka ọ bụrụ ọrịa dị oke obere. N'aka nke ọzọ, Mmemme Safelọ Akwụkwọ Nchekwa na-ekwuwapụta na pasent anọ nke ụmụaka, nke ahụ bụ otu n'ime ụmụaka iri abụọ na ise na-arịa Gender Dysphoria. Olee otú ha si nweta ọnụ ọgụgụ ahụ? Ọ dị ka ọ dị, na amaghị m, amaghị m ihe ha na-eche ma ọ bụ na-eme atụmatụ ya, mana ọ dị ka ha dabere na nke a na nyocha nke ndị nọ n'afọ iri na ụma na New Zealand ebe a jụrụ ndị na-eto eto 8,166 ọtụtụ ajụjụ. A jụrụ ha, “I chere na ị bụ transgender?” Ha nweziri ike ịkọwa ya. “Nke a pụtara nwa agbọghọ chere na ọ gaara abụ nwoke ma ọ bụ nwata nwoke chere na ọ gaara abụ nwanyị. You chere nke ahụ? ” Ugbu a, iji tinye nke a na gburugburu ya, nchọpụta ziri ezi nke DSM kwupụtara bụ na a ga-enwerịrị nyocha na-agbanwe agbanwe ma na-eguzogide ọgwụ n'ime oge nke ọnwa isii. N'ime nke a, ị na-ajụ ndị ntorobịa a. Ọ dị mgbe ị na-eche na ị nwere ike ịbụ nwa agbọghọ? Pasent 94.7 kwuru, "Ee e, enwebeghị m nsogbu ahụ." Pasent 1.2 kwuru ee. Pasent 2.5 kwuru na ha ejighi n'aka. Pasent 1.7 kwukwara, "Ọfọn, anyị aghọtaghị ajụjụ a."
Yabụ, etu o siri pụta na pasent 4, nke Schoolslọ Akwụkwọ Nchekwa na-ekwu, bụ na ha gbakwụnyere ndị ahụ na ndị na-ejighị n'aka ma wepụta akara nke anwansi, pasent 4, nke emepụtagoro ugbu a na-enweghị ike dịka ọ dị Eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ.
Ugbu a, kedu ka ajụjụ ndị ahụ si dị mma? Imirikiti mmadụ nwere obi abụọ banyere ajụjụ a na-ekesa ndị na-eto eto. Dịka ọmụmaatụ, n'otu nke ahụ, otu nnyocha ahụ weere na ọ bụ ikike ụfọdụ ndị bi n'Australia, ha jụrụ ha banyere mmerụ onwe onye. N'afọ gara aga ọ dịtụla mgbe ị merụrụ onwe gị? Pasent 23.4 kwuru, "Ee e." Pasent 45.5 kwuru, "Ee." Mana nke a bụ isi nke ajụjụ a. Pasent 23.7 gụrụ na ha aghọtaghị ajụjụ ahụ.
Ndị nọ n’afọ iri na ụma New Zealand nwere ike ịmacha asụsụ bekee nke na ha aghọtaghị ajụjụ dị ka nke a? Ma ọ bụ nke ahụ pụtara na ha na-atụgharị ihe a na akọrọ, yabụ, kedu ka o si bụrụ ezigbo ajụjụ ma ị chere transgender ma ọ bụ na ọ bụghị. Yabụ, enwere m obi abụọ na pacenti anọ ọ bụ ezie na a na-emepụtaghachi ya dị ka okwu, ọ na-emepụtakwa dị ka arụmụka na pacenti anọ, otu n'ime ụmụaka iri abụọ na ise, n'ụlọ akwụkwọ Australia bụ transgender yabụ, anyị ga-ele anya mgbe ma chebe ha pụọ ​​n'iji ike emegbu mmadụ, anyị ga-ahụrịrị na enwere ụlọ mposi pụrụ iche na ụdị ihe a niile.
Anyị ga-aga ụfọdụ n'ime ọgwụgwọ ụmụaka ndị a nwere ike ibute n'otu nkeji ma ọ bụ karịa, mana enwere nkwenye siri ike site na nkwupụta ndị ahụ. Gịnị kpatara nke ahụ? N'ihi na ndị ọzọ ekwuola na ọnụọgụ nke ịnagide ọgba aghara a dị oke elu. Ya mere, gịnị ka anyị na-ekwu? Ha na-ekwu nke otu n’ime iri abụọ na ise, pacenti anọ. Mana ọnụ ọgụgụ gọọmentị na-ekwu, nke ọma, kwụgidere na nke abụọ nke anaghị adịgide. DSM n'onwe ya na-ekwu na ọnụego nke ịnọgidesi ike na mgbagwoju anya sitere na 2.2% gaa na 30% na ụmụ nwoke mụrụ na na 12% na 50% na ụmụ nwanyị mụrụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ha na-ekwu bụ, n'agbanyeghị na ha nwere ike inwe mgbagwoju anya gbasara nwoke na nwanyị, ha bụ n'ezie, na-aga itolite na ya. Nke a bụ nnukwu nnabata ozi ụlọ. Ọ bụghị naanị DSM, mana na amaokwu niile edere. Ma ọ bụghị ihe m kwuru. Ntuziaka niile na-emesi obi ike na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ga-eto site na nke a site na oge uto, ọ bụrụhaala na ị naghị eme ha nsogbu.
Ugbu a, nke a bụ mmesi obi ike ka ukwuu. Ọ bụrụ n'ezie na e nwere pasent 4 na-agbagwoju anya ma ọ bụrụ na nke ahụ gbadata na 0.002%, nke ahụ dị oke ọgwụgwọ karịa ka emegoro. Mgbakọ na mwepụ nke si na 4% gbadata na 0.002% pụtara na 99% ụmụaka ndị a, dịka ọnụọgụ nke ha, ga-esi na nke a too. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mee ka ha nwee mmekọahụ.
Kenneth Zucker bụ onye ndu nke ụlọọgwụ na-arịa ọrịa dysphoria na Toronto. Enweghi otutu umu aka na nke a, mana o bu otu onye na akwado echiche a na otutu ndi mmadu gha aka. Ha ga-agaghachi azụ mmekọahụ nke ọmụmụ ha na njirimara nwoke na nwanyị kwesịrị ekwesị. Ọtụtụ n’ime ha. O kwuru, sị: “Somefọdụ n'ime ha. Otú ọ dị, ndị pere mpe ga-enwerịrị ụdị mmekọahụ ha bu pụta ụwa, ma ha ga-edina ụdị onwe ha. ”
Otutu gha aghaghachi na nmekorita nwoke na nwoke na nwanyi. Ndi pere mpe ga-adi ka nmekorita nwoke na nwanyi kama inwe mmekorita nwoke na nwanyi. Ọ sịrị. N'ezie, ndụ dịka nwoke idina nwanyị adịghị mgbagwoju anya, yabụ na a ga-ahọrọ ya karịa ndụ nwatakịrị e mere ka amachara nyefee usoro ọgwụgwọ homonụ na ịwa ahụ yana oge ndụ ha niile na nlekọta ahụike gụnyere. "
Ya mere, gịnị ka anyị kwurula banyere ya? Anyị elebaara anya na nke a. Anyị eleba anya na mmesi obi ike nke a ma anyị amalitela ile nke a anya dị ka nsogbu nke uche. Ya mere, okwesighi itinye aka, ekwesighi iduga n'ime oke ike, oke, intrusion n'ime uche na aru nke uzo ogwu, nke anyi ga ekwu banyere ya.
Vidio 2 - Dysphoria nke Nwata - Nkọwa nke Mmekọahụ. (Akụkụ 2) Pịa> Iji budata PDF ebe a.